Ilay Fampiasa Fihatsarambelatsihy Ho An’ny Finday Momba Ny Zon’Olombelona An’ny Polisy Nasionaly Ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Ilay Fampiasa Fihatsarambelatsihy Ho An'ny Finday Momba Ny Zon'Olombelona An'ny Polisy Nasionaly Ao Filipina
Voadika ny 02 Janoary 2018 18:58 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Italiano, 日本語, English
Ny pejin'ny fampiasa ao amin'ny Google Play “Fantaro ny Zonao” ao amin'ny fampiasa amin'ny finday PNP (Polisim-pirenena ao Filipina).
Nanangana ny fampiasa ho an'ny finday momba ny zon'olombelona izay mikendry ny hanampy ny polisy sy ny olom-pirenena hahafantatra ny zony ny Polisy Nasionaly ao Filipina (PNP) tamin'ny 4 Desambra teo. Saingy nanakiana ity hetsika ity ho “ohatra lavorary amin'ny fihatsarambelatsihy” izay tsy afaka ny hamafa ny dosie malaza ratsin'ny PNP mikasika ny zon'olombelona ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona .
Azo trohana ao amin'ny Google Play Store ilay fampiasan'ny PNP ary ahitana ny fampahafantarana momba ny tsangan-kevitra Miranda izay manondro ny zon'ireo voampanga ho afa-mangina, ny fitsipika arahina amin'ny fisavana, ireo bemidina fanaraha-maso atao amin'ny vahoaka, ​​ny didim-pitadiavana na fisamborana, ny famotorana any am-ponja, ny zo iadiana amin'ny fampijaliana, ary ny zon'ireo voasambotra, notànana, na iharan'ny famotorana any am-ponja, ankoatra ireo maro hafa.
Navoaka iray andro talohan'ny nanomezan'ny filoha Rodrigo Duterte baiko ny polisy mba hiverina indray amin'ny “ady masiaka amin'ny zava-mahadomelina” ny fampiasa “Fantaro ny Zonao” an'ny PNP, roa volana monja taorian'ny nanesorana izany tamin'ny fanentanana narahana korontana mikasika ny famonoana tanora maro[mg].
Fihetsiketsehana tamin'ny andron'ny fihetsiketsehana iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona tao Manila tamin'ny 10 Desambra lasa teo. Sary avy amin'i Ron Mesa, nahazoana alàlana.
Nilaza ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa namoizana ain'olona manodidina ny 13.000 teo ho eo ny fandaharan'asa fototra an'i Duterte izay hetsika iadiana amin'ny zava-mahadomelina, ireo olona ireo dia voampanga tamin'ny fivarotana zava-mahadomelina an-tsokosoko na voarohirohy tamin'ny fampiasana zava-mahadomelina ary novonoin'ny polisy an-kitsirano sy ireo andrimasom-pokonolona tohanan'ny fanjakana.
Tsy nahaliana ny mpanandra-tenin'ny zon'olombelona ny fampiasa PNP tao anatin'ireo andiana vonoan'olona mitohy nifandray tamin'ny “ady amin'ny zava-mahadomelina” , ny “ady amin'ny fampihorohoroana” anti-Moro, ary “ny ady” amin'ny mpiady anaty akata hamelezana ny hetsiky ny komonista revolisionera tao amin'ny firenena, ady notarihan'i Duterte [mg] avokoa .
Hoy i Cristina Palabay avy ao amin'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Karapatan hoe :
Ohatra tonga lafatra amin'ny fihatsarambelatsihy ilay fampiasa noforonin'izy ireo hoe “Fantaro ny Zonao” satria ireo hany fampiasa fantatry ny PNP dia ny fampiasa fampijaliana, ny fampiasa politikan'ny famonoana olona tsy nandalo fitsarana, ny fampiasa fisamborana tsy ara-dalàna sy ny fiampangana fanendrikendrehana, ny fampiasan'ny tsy rariny, ary ambonin'ireo rehetra irao, ny fampielezana ny viriosin'ny tsimatimanota.
Mponina mahantra an-tanàndehibe avokoa ny ankamaroan'ireo niharam-boina tamin'ny tokhang (hetsika iadiana amin'ny zava-mahadomelina). Sary avy amin'i Ciriaco Santiago, nahazoana alàlana.
Naneho ny ahiahiny mikasika ny fitsabahana ao amin'ny zon'ny mpisera any amin'ny fiainana manokana ihany koa ireo mpisera sy ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona ao amin'ny firenena. Nanontany tao anatin'ny lahatsoratra Facebook iray i Art Samaniego, Jr., mpanoratra momba ny teknolojia hoe nahoana ny fametrahana ilay fampiasa no mitaky fahazoan-dàlana manokana hiditra amin'ny antso sy ny lahatahirin'ny finday, ny hafatra SMS-n'ny mpisera, eny fa na dia ny sary sy ny dosie hafa aza :
Mahita saina mena aho ao amin'ilay fampiasa “Fantaro ny Zonao” an'ny Polisy Nasionaly ao Filipina. Nahoana izany no tsy maintsy mila miditra amin'ny SMS-ko, mijery ny lahatahirin'ny findaiko ary mijery sy mampiasa ny sary sy ny lahatsariko raha toa ka hoe ny “hanome vaovao mahaliana ho an'ny vahoaka sy ny mpiasan'ny PNP rehetra momba ny zon'olombelona fotsiny” no tanjony ?
Voalaza fa nangataka ny PNP mba hanavao ilay fampiasa nanomboka tamin'izay ny Departemantan'ny Fampahalalam-baovao sy ny Teknolojian'ny Serasera mba tsy hangatahan'izany amin'ireo mpisera intsony ny fidirana amin'ny fiainan'olona manokana. Saingy na dia nanao fanitsiana ilay fampiasa aza ny teknolojia vaovao mba ho azo antoka ny fitrohana izany, dia mbola mitoetra ny olana goavana ho an'ny mpisolovavan'ny zon'olombelona Filipiana amin'ny tsy firaharahiana ny zon'olombelona miharihary ataon'ny governemanta Duterte:
Tsy maninona ny habetsaky ny fampiasa amin'ny aterineto izay kasain'ny PNP hapetraka momba ny zon'olombelona, ​​na ny habetsaky ny kopian'ny boky torolalana momba ny zon'olombelona zarainy. Tsy afaka mamafa ny zava-misy tsy azo lavina anefa izany fa anisan'ireo lohalaharana amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena any ivelan'ny aterineto sy eny an-kianja izy ireo.
Mpianatra maneho ny famoretana atao amin'ny zon'ny vahoaka eo ambanin'ny fitondrana Duterte nandritra ny andron'ny fihetsiketsehana iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona tamin'ny 10 Desambra tao Manila. Sary avy amin'i Ron Mesa, nahazoana alàlana.